1 Samueri – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Category Archives: 1 Samueri
1 Samueri 1
Kuberekwa kwaSamueri 1 Zvino kwakanga kuno mumwe murume weRamataimu, muZufi, wenyika yamakomo yaEfuremu, ainzi Erikana, mwanakomana waJerohamu, mwanakomana waErihu, mwanakomana waTohu, mwanakomana waZufi muEfuremu. 2 Aiva navakadzi vaviri; mumwe ainzi Hana mumwe achinzi Penina. Penina akanga ana vana asi Hana akanga asina. 3 Gore negore murume uyu aibuda achibva muguta rake kuti andonamata nokubayira zvibayiro […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 1
1 Samueri 2
Munyengetero waHana 1 Ipapo Hana akanyengetera achiti: “Mwoyo wangu unofara muna Jehovha; muna Jehovha runyanga rwangu rwasimudzirwa kumusoro. Muromo wangu unotaura usingatyi pamusoro pavavengi vangu, nokuti ndinofarira ruponeso rwenyu. 2 “Hakuna mutsvene akaita saJehovha; hakuna mumwe kunze kwenyu; hakuna Dombo rakaita saMwari wedu. 3 “Usaramba uchitaura uchizvikudza uye manyawi ngaarege kubuda mumuromo mako, nokuti Jehovha […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 2
Jehovha anodana Samueri 1 Mukomana uyu Samueri aishumira pamberi paJehovha ari pasi paEri. Mumazuva iwayo shoko raJehovha rakanga risinganzwiki-nzwiki, kwakanga kusina zviratidzo zvizhinji. 2 Rimwe zuva usiku, Eri akanga akavata panzvimbo yake yamazuva ose, uye meso ake akanga oonera madzerere, asisagoni kuona zvakanaka. 3 Mwenje waMwari wakanga usati wadzimwa, uye Samueri akanga akarara pasi mutemberi […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 3
VaFiristia vanopamba Areka 1 Uye shoko raSamueri rakasvika kuIsraeri yose. Zvino vaIsraeri vakaenda kundorwa navaFiristia. VaIsraeri vakaungana paEbhenezeri, vaFiristia vakavaka misasa yavo paAfeki. 2 VaFiristia vakagadzirira varwi vavo kuti vandosangana neIsraeri, uye hondo payakanga yava kupararira, Israeri yakakundwa navaFiristia, vakauraya varume zviuru zvina zvavo pavairwira. 3 Varwi pavakadzoka kumusasa, vakuru veIsraeri vakabvunza vakati, “Sei Jehovha […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 4
1 Samueri 5
Areka muAshidhodhi nomuEkironi 1 Mushure mokunge vaFiristia vapamba areka yaMwari, vakaitora kubva kuEbhenezeri vakaenda nayo kuAshidhodhi. 2 Ipapo vakatakura areka vakapinda nayo mutemberi yaDhagoni vakaiisa parutivi rwaDhagoni. 3 Vanhu veAshidhodhi pavakamuka mangwananingwanani zuva raitevera, wanei hoyo Dhagoni akawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha! Vakatora Dhagoni vakamudzosera panzvimbo yake. 4 Asi mangwanani aitevera pavakamuka wanei hoyo […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 5
1 Samueri 6
Areka inodzoserwa kuIsraeri 1 Areka yaJehovha yakati yava nemwedzi minomwe iri munyika yavaFiristia, 2 vaFiristia vakadana vaprista navavuki vakati, “Toitei neareka yaJehovha? Tiudzei kuti toidzosera sei kunzvimbo yayo.” 3 Vakapindura vachiti, “Kana muchidzosera areka yamwari weIsraeri, musaidzosera isina chinhu, asi edzai nepamunogona kumutumira chipiriso chemhosva. Ipapo muchaporeswa, uye muchaziva kuti sei ruoko rwake rusina kubviswa […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 6
1 Samueri 7
1 Saka varume veKiriati Jearimi vakauya vakatora areka yaJehovha. Vakaiendesa kuimba yaAbhinadhabhi pachikomo uye vakatsaura Ereazari mwanakomana wake kuti achengete areka yaJehovha. Samueri anokurira vaFiristia paMizipa 2 Areka yakaramba iri paKiriati Jearimi kwenguva yakareba kwazvo, makore makumi maviri pamwe chete, uye vanhu vose veIsraeri vakachema uye vakatsvaka Jehovha. 3 Ipapo Samueri akati kuimba yeIsraeri, “Kana […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 7
1 Samueri 8
VaIsraeri vanokumbira Mambo 1 Samueri akati akwegura, akagadza vanakomana vake kuti vave vatongi veIsraeri. 2 Zita redangwe rake rainzi Joere uye zita rowechipiri rainzi Abhia, uye vaishanda vari paBheerishebha. 3 Asi vanakomana vake vakatsaukira kupfuma yakaipa, vakatambira fufuro, vakasaruramisira pakutonga. 4 Saka vakuru vose veIsraeri vakaungana pamwe chete vakauya kuna Samueri paRama. 5 Vakati kwaari, […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 8
1 Samueri 9
Samueri anozodza Sauro 1 Kwakanga kuno murume worudzi rwaBhenjamini, ainzi Kishi mwanakomana waAbhieri, mwanakomana waZerori, mwanakomana waBhekorati, mwanakomana waAfia muBhenjamini, murume wesimba noumhare. 2 Aiva nomwanakomana ainzi Sauro, jaya raiyemurika rakanga risina akaenzana naro pakati pavaIsraeri, akanga akareba kupfuura vose. 3 Zvino mbongoro dzaKishi, baba vaSauro, dzakanga dzarasika, Kishi akati kuna Sauro mwanakomana wake, “Tora […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 9
1 Zvino Samueri akatora chinu chamafuta akadurura pamusoro waSauro akamutsvoda uye akati, “Jehovha haana kukuzodza here kuti uve mutungamiri wenhaka yake? 2 Pauchabva pandiri nhasi, uchasangana navarume vaviri pedyo neguva raRakeri, paZeriza pamuganhu waBhenjamini. Vachati kwauri, ‘Mbongoro dzawakaenda kundotsvaga dzakawanikwa. Zvino baba vako havachafungi nezvadzo asi vava kufunganya pamusoro pako. Vava kungobvunza vachiti, “Ndichaiteiko nezvomwanakomana […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in1 SamueriLeave a comment on 1 Samueri 10